Mango Sales - Zvipfeko zvekutanga zvaunoda mwaka uno | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 10:00 | Chii chandinopfeka
ari Mango kutengesa Ivo vanogogodza pamusuwo wako uye ikozvino unogona kuwana zvinoshamisa discounts. Ndokusaka usingafanirwe kupotsa mukana wekunakidzwa neimwe neimwe yehembe dzatakakusarudzira. Sezvo iwe uchizozvida muzuva rako nezuva nekuti ndezvechokwadi.
Pamusoro peizvi, iwe unotoziva kuti kutengesa inogara iri nguva yakakodzera yekuwana zvimwe zvinhu zvitsva zvaunogona kupfeka kwemwedzi yakati wandei. zvipfeko zvinoshanda kuti iwe uchawanawo mune inotevera sarudzo. Unoda kuziva kuti chii? Tora zvakanaka kune mumwe nemumwe wavo kuti unakirwe nemhando yepamusoro mwaka uno!
1 Mango sales sweaters uye cardigans
2 mabhachi ari kutengeswa
3 Madhirezi kana masiketi?
4 Denim pants uye dungarees
Mango sales sweaters uye cardigans
Mango sales anosvika akatakura mazano makuru maererano nejuzi uye cardigans zvakare. Ndicho chikonzero munyaya yekutanga, tichazowana zvipfeko zvakasununguka, semutemo mukuru, izvo zvichatipa kubata kwekunyaradza kwezuva rimwe nerimwe. Asi handizvo zvese, nekuti kune rimwe divi, izvo zvakakosha zvinogara zviri kudivi redu, asi nekuwedzera kwazviri, ruzivo rwakadai senge rhinestones, embroidery kana kucheka-kunze mitsipa haidi kupotsa parade futi. Ndicho chikonzero iwe unogona kusarudza kubva kune zvakasiyana-siyana pamitengo yakaderera pane zvaungafungidzira.
Zvechokwadi, kana ukasarudza kupfeka jekete, iwe unogara uine sarudzo uye yakawanda mune yakasimba. Nekuti ivo vanoonekwawo neiyo yakakura kupera kutisiya isu takasununguka vasanganise nema t-shirts kana ribbed sweaters pasi pavo. Inguva yekusarudza zvipfeko zvakapfava uye zviri nyore, zvine mabhatani makuru kuti upe chipfeko humwe hunhu, kana zvichibvira. Mavara asina kwaakarerekera kana ekutanga achange ari iwo ma protagonists asingaperi.
mabhachi ari kutengeswa
Chokwadi mwaka uno imwe yezvipfeko zvakakosha inowira pamajasi. Nokuti ivo ndivo vanotibvumira kuti tiwedzere kugadzikana uye zvechokwadi, nguva dzose kure nechando. Saka, kune rumwe rutivi tinonunura pfungwa inopfuura yakakwana pakati pekutengesa kweMango uye ndiko kuti chipfeko chinogadziriswa. Saka isu tine maviri kune imwe uye isu tinoda izvo: Kune rimwe divi, yematehwe maitiro uku kune rimwe, richava bvudzi rinotichengeta tichidziya.
Asi kana iwe uchida majasi izvo Havabude muchimiro semakushe uye mazamu maviri, uri murombo. Zvinoita sekuti kambani yazvionawo. Nekuti iwo akakosha uye atinogona kugadzira akasiyana mapedzi uye masitaera. Kubva kune izvo zvakasanganiswa nejeans semamwe semi-formal ane jira bhurukwa. Zviri kwauri!
Madhirezi kana masiketi?
Kana zvakatiomera kuti usarudze, saka zvakanakisa kuti usarudze ese ari maviri. Nokuti kune rumwe rutivi midi uye ribbed madhirezi anogara ari mamwe makuru ekutanga. Zvokuti iwe unogona kuvaperekedza nevest, bhandi rakakura kana pasina chinhu chinovapa mukurumbira. Kune rumwe rutivi, masiketi akareba-mabvi ane maprints mumavara ekutanga zvakare imwe yenzira dzakanakisa dzekubatanidza fashoni muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Denim pants uye dungarees
Iyo cowboy style haigone kushaikwa pakati pezvipfeko zvekutengesa muMango. Asi munyaya iyi taida kuvavheneka nebhaibheri. Nokuti nguva dzose ndeimwe yezvipfeko zvinopa nyaradzo huru uye saizvozvo, inofanirwa kuvapo muupenyu hwedu. Iye zvino, mabhuruku akatwasuka uye ejira haasi kure kumashure. Nemhaka yokuti tinogona kuvaratidzira kubasa kana kuti kumisangano iyoyo inokosha. Iva izvo zvingaita, ivo vakakumirira iwe mukutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Nguo dzekutanga dzauchawana mukutengesa kweMango
Mazano akanakisa ekufamba rwendo